Indawo enhle yasolwandle enokubukwa okuhle!
I-condo enhle elungiswe kabusha e-Mahina Surf. Isakhiwo sisogwini lolwandle. Lena inkimbinkimbi enhle, ephelele ukuze ubalekele izinkathazo zokuphila. Kuyibanga lokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela ezinhle, nokho, okugcwele ngokugcwele konke okudingayo ukuze udle khona. Kunendathane yezindawo zokupaka ezingabelwe eduze ne-condo, ngeke ukhokhe noma iyiphi imali yokupaka, i-wifi noma imali yokuvakasha.
Jabulela ukuhlala emthunzini we-lanai yakho, ubukele amagagasi efika evela olwandle, futhi wenze izinhlelo zentambama yokuphumula eceleni kwechibi kule nkundla ephambi kolwandle i-Mahina Surf. Ziphuzele ikhofi lakho lasekuseni emoyeni opholile wesiqhingi, nquma ukuthi uzobeka ini endaweni yokushisa yolwandle ukuze uthole isidlo sasemini, futhi ujabulele ukunethezeka njengekhishi eligcwele, kanye nedamu lokubhukuda elikhulu lomphakathi ukuze bakwamukele ekhaya kusukela ogwini usuku ngalunye.
Imayela nje ukusuka ku-Honoapiilani Road, uzothola imakethe yabalimi lapho ungathola khona izithelo nemifino emisha, kanye nokuqashwa kwamagiya olwandle kwa-Boss Frog's. Ibhishi elidumile laseKa'anapali kanye neBlack Rock, indawo edumile ye-snorkel, kungaphansi kwamamayela amane ukuya eningizimu, lapho ungathola khona isikebhe esiqashiwe ne-Hula Girl, udle isidlo sasemini e-Hula Grill, noma uyothenga e-Whaler's Village. Ipaki yolwandle edumile, i-S-Turns, iyindawo nje embalwa enyakatho - indawo enhle yepikiniki.
Ngiyajabula ukunikeza izincomo nokho, angikho esiqhingini futhi awekho ama-concierge noma ezinye izinkonzo njengoba leli akulona ihhotela. I-condo ifaneleka kakhulu kubahambi abazokwazi ukufunda, ukukhuluma, nokubhala ngesiNgisi.